Nnukwu ihe ncheta ọla nchara n ’Africa akpọrọ Mother of Humanity Momument - Afrikhepri Fondation
Ihe ncheta ọla kọpa kasịnụ n'Africa akpọrọ nne nke mmadụ
Lenye Cameroon ama okodụn̄ ke n̄kponn̄kan okpoho okpoho emi ẹkande ke Africa. Akpọrọ "Nne Ncheta nke Humanmụ Mmadụ", nke a bụ nke Nijart International, Mother of Humanity Monument Foundation Inc. na-akwado nkwado a, kamakwa ndị ama ama si America sitere na sinima, televishọn, egwu, azụmahịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Akụrụngwa ndị ekwuputara ga-abụ, dị ka ndị na-akwalite ya si kwuo, onyinye sitere n'aka ndị United States nke America nye Africa iji kelee Africa na ndị bi na ya maka nnukwu onyinye na-enweghị atụ ha nyere na-ewu ụwa, iji belata esemokwu na kwalite udo na ụwa site n'ịkpọ mmadụ niile ka ha mee ụdị ịhụnanya a na-enweghị atụ na otu mmesapụ aka a.
A ga-ewu ihe ncheta nke Nne nke Humanity na Cameroon, n'ọdụ ụgbọ mmiri Kribi. Mba a họọrọ site n'aka ARK Jammers Connection, onye na-akwado ọrụ a baptizim « Nne nke Ncheta Mmadu ».
Cameroon na mba ndị ọzọ Africa, na Morocco, Tanzania, Nigeria na Ghana.
Ihe oru ncheta a bu maka owuwu nke nnukwu ulo nke ọla, nke ruru hectare 80 na mita 95 n'ịdị elu. Ọ ga-enwe ala iri abụọ na itoolu. Akụkụ ọzọ bụ iwu, na nke ọ bụla n'ime 29 States Africa, nke ụlọ nke ọdịbendị. Ego niile a ruru ihe ruru nde $ 54, ma ọ bụ ihe dịka ijeri FCfa 200.
Ego a ga enweta site n'onyinye nke anakpo na United States site na ndi amara America na ihe nkiri, telivishọn, ahia na ndoro-ndoro ochichi.
Okwu mmalite nke "Existence-Exile" nke Grobli Zirignon sitere na Sery Bailly
Agụmakwụkwọ - Nne (PDF)
Kedu ka ijide akụ na ụba si gbochie Ọmụmụ ihe ọmụmụ - Akwụkwọ edemede (2019)
Ime anwansi - Rudolf Steiner (PDF)